Fitaovana fampirimana vy Steel, fisie vy, fanamafisam-peo vita amin'ny vy ary mpanamboatra | Boda
Fitaovana fisie vy, fisie vy, napetraka ho rakitra vy mafy
Ny rakitra dia ampiasaina hanapahana ny sehatry ny sangan'asa mba hahatratrarany ny endrika, ny habe ary ny hamafin'ny endrika takiana amin'ilay sary. Ity fomba fanodinana ity dia antsoina hoe fanapahana rakitra.
Izy io dia azo ampiasaina hanodinana ny sehatry ny sanganasa, ny lavaka anatiny, ny lakan-drano ary ny endrika ivelany sarotra. Ny fahamendrehany dia mety hahatratra 0,01mm, ary ny fahasarotan'ny tarehiny Ra dia mety hahatratra 0,8 μ M. Mandritra ny fikojakojana ny fiara dia mila apetraka ny akanjo tsy mitovy sy ny fanovana ny ampahany amin'ny tsirairay. Ny fametrahana ny rakitra dia asa iray amin'ny tanana, izay iray amin'ireo fomba lehibe hijerena ny tena fahaiza-miasa amin'ny mpanamboatra fiara.
1. Fitaovana fanaovana rakitra
Amin'ny ankapobeny ny rakitra dia vita amin'ny vy vy vy vy T12 sy T13 ary mihamafy ho 62 HRC ~ 67 HRC aorian'ny fitsaboana hafanana.
2. Fanakana rakitra
Ny fisie dia misy fisie ambonin'ilay rakitra, sisin'ny rakitra, lela-drakitry ny rakitra, rambon'ny rakitra, tahony hazo sns
3. Karazana sy fitsipiky ny fisafidianana rakitra
(1) Ny karazana fisie dia azo zaraina ho rakitra fitter, rakitra manokana ary fisie plastika arakaraka ny fampiasany.
① Ny fisie fisie dia azo zaraina ho karazany dimy arakaraka ny endriny miampita: fisie fisie, fisie boribory, fisie semi-boribory, fisie toradroa ary fisie telozoro; arakaraka ny volavolan'ny nify, azo zaraina ho rakitra tokana nify iray sy fisie maodely roa nify; arakaraka ny hatevin'ny lamina nify, azo zaraina amin'ny karazany dimy izy io: rakitra nify maratra, fisie antonony, rakitra nify tsara, fisie malefaka (nify tsara indroa) ary rakitra malefaka tsara.
② Ny rakitra mamolavola dia ampiasaina amin'ny masinina tsara ary manaparitaka ireo ampahany madinidinika sarotra apetraka amin'ny workpiece. Izy io dia misy rakitra maromaro miaraka amina endrika miampita.
③ Ny rakitra manokana dia azo ampiasaina hanodinana faritra ambonimbony manokana. Manana karazany roa mahitsy sy miolakolaka izy, ary maro ny endriny miampita.
(2) Fitsipika mifidy ny fisie
Ny fisafidianana ny endrik'ilay rakitra dia miankina amin'ny endrik'ilay workpiece hozahana; ny hatevin'ny fisie dia voafaritra amin'ny haben'ny karama famahanana, ny haavon'ny marin-tariby ary ny hamafin'ny fitaovam-piasana. Amin'ny ankapobeny, ny rakitra marokoroko dia mety amin'ny metaly malefaka miaraka amin'ny karama fametahana milina lehibe, ny fahamendrehan'ny milina ambany ary ny fahamendrehana ambonimbony, fa ny rakitra tsara kosa no mifanohitra amin'izany.
Previous: Scraper, antsy putty, tahony hazo, tantana plastika, spatula, antsy vy putty
Manaraka: Fitaovana fitaovana an-trano, fivoriambe fitaovana, kitapo fanamboarana fiara, fitaovam-pitaovana DIY, fitaovana napetraka amin'ny tanana, fitaovana iraisan'ny rehetra
Kitapo vy vita amin'ny vy mihamafy
File Filessteel rakitra rakitra vy
Roller hosodoko, borosy, roller
Scraper, antsy putty, tahony hazo, plastika ha ...